Kooxda SSC oo la faray inay isku dhiibaan 24 saacadood Gudahood ! | S A R A A R N E W S
Kooxda SSC oo la faray inay isku dhiibaan 24 saacadood Gudahood !	Added by admin on February 4, 2011.Saved under Articles, Photo Gallery, Video Gallery, Wararka	Burco(saraarnews) Guutooyin ka tirsan Ciidamada Qaranka oo isugu jira Guutooyinka Taangiyada, Madaafiicda iyo Hawlgalka degdega ah ayaa amar lagu siiyey inay u dhaqaaqaan deeganka Buuhoodle, ciidamadan ayaa ku biiray guutooyin hore oo ka tirsana Ciidamada qaranka oo halkaasi ku sugnaa si ay u dhexgalaan beelo degaankaa khilaaf ku dhex maray bilahii u danbeeyey.
Maanta gelinkii hore ayaa Kooxda nabadiidka ah ee SSC ku soo tuureen dhawr tuuryo oo madaafiic ah taasina waxay keentay in ciimadan loo dhaqaajiyo degaankaasi buuhoodle, waxaana wararku cadaynayaan in ciidamadaasi galabtaba gaadheen fadhiisimada ciidamadii qaranka ee kaga sii horeeyey halkaas. Ciidamada qaranka ayaa la filayaa inay dhirbaaxo aan hore loo arag ku dhufan doonaan kooxdaasi nabaddiidka ah ee deegaankaasi ku dhuumaalaysanayey mudooyinkii aynu soo dhaafnay.
Dhinaca kale ciidamada qaranka Somaliland ayaa ugu baaqay kooxdaasi inay isa soo dhiibaan 24 saacadood ee soo socda , waqtigaa wixii ka danbeeyase loola dhaqmi doono sidii cadow shisheeye oo dalka ku soo duulay, talaabo aan naxariis lahayna laga qaadi doono. Wararka u danbeeyey ayaa sheegaya caawa in qaybo ka mid ahaa ciidankaasi nabadiidka ah ee SSC sheegeen inay is dhiibayaan ilaa berito subaxnimada.
Waxaynu eegi doonaa Xaaladu halka ay ku danbayso.
Be Sociable, Share! Tweet	22 Responses to Kooxda SSC oo la faray inay isku dhiibaan 24 saacadood Gudahood !	Newer Comments →
sahra February 4, 2011 at 10:49 pm	insha alaah idinkaa ku jabaya isaaqoow waayo ssc waa xaq udirir mujaahidiina guul ssc
Ubax February 4, 2011 at 11:02 pm	kkkkkkkkkkk naya sahra haye ma is keentay islaan heerin dhuloos ah umad horayne dhidhibso nacas yahay calacalka jooji iska xeji xabada waa kugu so socota kkkkkkkk wayba reyonesa naya ma mid rer shekh isxaaq ba kaga so turay labo kkkkk sisi bad u kacsanesa loooooooool orod ka seexo meshaan logama bahna islaan marqaansan .
Aar February 4, 2011 at 11:26 pm	Looma baahna in digniin iyo wax lamida lagu meeraysto e waan in mar haday iyagu bilaabeen madaafiic in jawaabtooda oo ta ugu adag ah la siiyo. Haddii mar cagta la mariyo sheekadooda wey hadhaysaa haddii kale illaa qiyaamaha ayaa la is daba jiitami doonaa taasina mid la aqbali karo maaha. Buuhoodlena waa in gacanta lagu qabtaa.
sagal February 4, 2011 at 11:29 pm	s/c dumarow xishooda dhibta jirta wax lagu farxo maaha ilaahayna rageena xaqa ha tuso idinkana ilaahay ka xishooda hadalkiinana u fiirsada ha ilaawina labada malag ee garbihiina saaran MA AAAR BAA NINKII GANAY LIBTA KALA GALBANAYAA??? February 5, 2011 at 1:51 am	GAALLO JABKEEDAY QARSATAA HORE AYAA SEYID MAXED U SHEEGAY IIDOOR WAGAASH IYTO KUFRIGA WCAD BAA U YAAL WAR RUNTA KA SHEEGA DHIRBAAXADII SAAKA IDIN SOO GAADHAY IYO KHASARAAIHII MADAAFIICDA SSC EE DHIMASHADA BADAN GEEYSTAY
DhulbahanteQaran February 5, 2011 at 5:55 am	SSC waa urur doonaya inu afduubo magaca beesha sharafta leh ee Dhulbahante balse taasi wax dhici doonta ma aha.
1960 Garaadki Dhulbahante ayuu aha ninka yidhi Somaliland yaanay la midoobin Somalia ee aynu dhowr sanadood sugno oo aynu eegno hadi ay wanaagsan tahay iyo in kale, waa laga diidey, waana la mideeyay labadi dal ee Somaliland iyo Somalia, waxaana la noqdey Somali republic. Maanta waxa aynu wada ognahay inu Garaadku saxsana.
Dhulbahante beel ahaan dagaal kasta oo Somaliland lagu difaacayo jirirtaankiisa qeyb libaax buu ka qaatey, hadi ay noqoto dagaaladi dowlada Somaliland iyo kuwo Xamar rabey waqtigi Cigaal, hadi ay noqoto dagaaldi Somaliland iyo Puntland ee Sool iyo imikaba dagaalkan ka socda koonfurta Togdheer.
Kolkaas afar nin oo SSC isugu yeedha oo qurbaha ka yimi oo doonaya inay qurbajooga lacag ka gurtaan sinaba uma afduubi doonan magaca beesha sharafta leh ee Dhulbahante ee shalay iyo maantaba safka hore kaga jirey difaaca qaranimada Somaliland af iyo adinba.
Dhulbahante ha noolado Somalilandna ha noolato, cadowga labadoodaba ha jabo!
horordhiciye February 5, 2011 at 10:21 am	waar rabshada joojiya oo illaah kabaqa wax aad isku hyasa ba wa laxalin mar tol oo colka jooja